Madaxda Xisbiga Waddani ee Toronto Canada oo kulan is waraysi iyo der-der galin hawlaha xisbiga ku saabsan isugu yimid.Daawo Sawiro | Salaan Media
Madaxda Xisbiga Waddani ee Toronto Canada oo kulan is waraysi iyo der-der galin hawlaha xisbiga ku saabsan isugu yimid.Daawo Sawiro
Kulan ay isugu yimadeen madaxda Xisbiga Waddani ee Canadda ayaa waxa uu ku saabsanaa der-der gelinta hawlaha Xisbiga,soo dhaweyn xubno muhiima oo kusoo biiray iyo is waraysi ku saabsan waxyaalihii ugu danbeeyey.
U jeedooyinkii kulanku magacaabay, Alla Mahad Le, waa lagu guulaystay: xubno cusub ayaa ku soo biiray WADDANI– is’barashada iyo is’dhiiri galin’tuna wey badnayed oo waa laga gun gaadhay.
Fikrada shirka, qaboqaabintiisa iyo isku dubo’ridka kulanka waxa lahaa Guddomiyaha Garab’ka Haweenka ee WADDANI, Toronto Canada, Marwo Suhuur Xasan Abiib, iyo dhamaan Haweenka WADDANI. Mahad gaar’ah habaynta shirka waxa is’ka le MarwoAmina Abdi Jamac oo qayb weyn ka qaadatay.
Kulanka waxa furay Gudoomiyaha Xisbiga WADDANI ee Toronto, Canada, Mudane Jamac Jamac, oo jaliyada ka soo qaybgashay shirka u fahfaahiyay ujeedoyinka Xisbiga WADDANI ee guud, marka’ay xaga is’qadarinta, cadaalada iyo sin’naata noqoto. Ka’dib waxa isna erayo qiimo iyo qaayo badan yidhi Mudane Dr. Cali Sugule oo isna ka hadlay dhaliilaha xisbi’xaakim’ka ee Kulmiye u maanta leeyahay , isaga oo xisbigaasi, sida uu Dr. Cali Sugule fahfaahiyay, la’ dagay Somaliland, oo u shicib keedana hoos u dhigay. Waxa isna hadlay Cali Ibrahim Jaamac( Baqdaadi) oo sheegay in ay dadku maalin aan sii fogayn ku walaaloobi doonaan kuna midoobi doonaan Xisbiga WADDANI. Markaa ka dib waxa hadashay Gudoomiyaha Garab’ka Haweenka, Marwo Suhur Hassan Abib, oo ku xajisay mudanayaasha iyo marwooyinka shirka, in had iyo jeer la’tix galiyo dumarka Somaliland meel ay joogaan’ba , la qadiriyo, xilka iyo mas’uuliyadna la’la qaybsado. Marwo Suhur waxa kale oy ku dhiiri’galisay jaaliyada goob jooga u ahayd shirka, midnimada Xisbiga WADDANI sidii loo ilaa’lin lahaa oo loo xoojin lahaa.
Waxa iyana si diiran u hadashay Marwo Amina Abdi Jamac oo ka hadashay mustaqbalka Xisbiga WADDANI iyo hog’aankiisa wacan. Marwo Amina waxay ku adkaysay qurbo jooga reer Somaliland in ay ka faaidaystaan meesha ay joogaan’ba una faaideeyaan WADDANI iyo Somaliland. Ka dib waxa hadlay Mudane Ibrahim Cabsiye oo taabtay sababaha dadku ay u ugu biiraan ama u duurtaan xisbiyada siyaasadeed. Kuwaas oo ah, siduu Ibraahim Absiye, fahfaahiyay ” platformaka” ama barnaamijka Xisbiga iyo hog’aanka Guddomiyihiisa. Mudane Ibraahim Cabsiye wuxu cadeeyay in uu ka helay Xisbiga WADDANI platform raali’galiya iyo Gudoomiye aan mid’kale lagu doorankalin’ba. Ugu dambaystii waxa hadlay Abwaan Abdillahi Lecture oo gabay layaable oo amaan ah WADDANI tiriyay.
Gudoomiyaha Waddani garabka Haweenka Suhuur Xasan Abiib
Waddani Media Canada